जहाँ दुई विवाह नगरे जानुपर्छ जेल
२०७५ माघ ७ सोमबार, काठमाडौं । कुनै जामानामा राजाहरुले दुई वा तीन रानीहरु बनाउने गर्थे । उनीहरु आफ्नो इच्छाअनुसार विवाह गर्ने गर्थे । यद्यपि विश्वको यस्तो पनि मलुक छ, जहाँ पुरुषलाई दुई विवाह गर्नु अनिवार्य हुन्छ । ... बाँकी अंश»
जहाँ पुजिन्छ भगवानको उल्टो प्रतीमा, यस्तो छ कारण
२०७५ माघ ७ सोमबार, काठमाडौं । भारतमा हनुमानको पूजाआजा विशेष किसिमले गर्ने गरिन्छ । भारतमा हनुमानको मन्दिर पनि धेरै छन् । मध्य प्रदेशको इन्दौरको सांवेरमा हनुमानको एक विचित्रको मन्दिर रहेको छ । सांवेरको यो मन्दिरमा हनुमानको उल्टो प्रतिमा रहेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ माघ ७ सोमबार, काठमाडौं । कफी विश्वको सबैभन्दा बढी पिइने पेय पदार्थमध्येको एक हो । कफीलाई धनी मानिसहरुको पेय पदार्थको रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । यस्तोमा कफीको पनि विभिन्न किसिमको मूल्य हुने गरेको छ । यस्तोमा सबैभन्दा महँगो कफीको अनुमानित मूल्य ११५० डलर प्रतिकिलोग्राम रहेको छ । ... बाँकी अंश»
मृत्युपछि कपडामा अन्तिम संस्कार गराउन चाहनुहुन्छ ? कम्पनीले ल्यायो नयाँ प्रस्ताव
२०७५ माघ ७ सोमबार, काठमाडौं । धेरै मानिसहरुलाई विभिन्न किसिमका कपडा लगाउन मन पर्छ । केही मानिसहरु आफ्नो कपडाको लागि केही कुरामा पनि सम्झौता गर्दैनन् । यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै एक कपडा कमपनीले विशेष किसिमको ड्रेस बनाएको छ । यो कपडाको महतवपूर्ण विशेषता भनेको यो कपडा अन्तिम संस्कारमा लगाउनका लागि बनाइएको हो । ... बाँकी अंश»
अनुसन्धानका लागि चिताबाट निकालियो शव
२०७५ माघ ७ सोमबार, काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित एक गाउँमा ५० वर्षीया महिलाको शव बल्दै गरेको चिताबाट निकालिएको छ । प्रहरीले शवको जाँचका लागि चिताबाट निकालेको हो । साथै प्रहरीले उनका पति र अन्य चारजना मानिसहरुमाथि हत्याबारे झुट बोलेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । ... बाँकी अंश»
पतिले राखे बच्चाको यस्तो नाम, पत्नीले मागिन् सम्बन्धविच्छेद
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौं । एउटा बच्चा जन्मिने विषयमा आमाबाबु कति धेरै उत्साहित हुने गर्छन् । केहीले जन्मिनुभन्दा पहिला नै आफ्नो आगामी सन्तानको नामाकरण पनि गर्छन् । यद्यपि एक दम्पत्तीलाई भने यस किसिमको उत्साहले सम्बन्धविच्छेद नित्याएको छ । ... बाँकी अंश»
यो विषालु रुखसँग डराउँछन् मानिसहरु, जानसक्छ ज्यान
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौं । विश्वमा धेरै चीजहरु यस्ता हुन्छन्, जसले मानिसलाई नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ । जसको कारण उक्त चिजहरुबाट मानिसहरु टाढै रहनु राम्रो हुन्छ । तर संसारमा यस्तो पनि रुख छ, जसको नजिक जान पनि मनाही गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
छात्रले तोडे अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सयवर्ष पुरानो परम्परा
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौं । विश्वको धेरै स्थानहरु पुरुष प्रधान छन् । केही मलुकहरु बिस्तारै लैङ्गिक समानतातर्फ अघि बढेका छन् भने केही मुलुकमा समानताको लागि प्रयास भइरहेका छन् । यस्तोमा विश्वकै प्रख्यात अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा भने पछिल्लो एकसय वर्षदेखि पुरुषहरु एक अधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएका थिए । ... बाँकी अंश»
मोबाइल नदिएपछि जलाएर पतिको हत्या
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै मानिसहरु स्मार्टफोन र समाजिक सञ्जालमा झुण्डिने क्रम बढ्दो क्रममा छ । यस किसिमको प्रभाव कहिलेकाँही पारिवारिक सम्बन्धमा पनि आउने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
बिरामीको पेटमा डक्टरले भरे ५ लिटर वियर
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौं । यदि कुनै व्यक्ति बिरामी भएर अस्पताल पुग्दा उसलाई डक्टरले मदिरा खुवायो भन्ने मानिसहरुले के भन्लान् ? यद्यपि एक डक्टरले भने बिरामीलाई मदिरा खुवाएर नै उपचार गरेका छन् । यद्यपि मदिरा खुवाउनुको उद्देश्य भने बिरामीलाई बचाउनु नै थियो । ... बाँकी अंश»
महिलाले आइसक्रिम चाटेर खानु भद्दा
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौं । विवाद पनि अचम्मकै रोग हो । यस्तै विवाद भएको छ आइसक्रिम चाटेर खाएको प्रसंग । घटना हो टर्कीको इस्तानबुलको । ... बाँकी अंश»
नशा त्याग्दै नागा, शैक्षिक योग्यताको आधारमा तोकिन्छ पद
२०७५ माघ ५ शनिबार, काठमाडौं । भारतमा अहिले कुम्भमेला चलिरहेको छ । कुम्भमेलामा अन्य आकर्षणका साथ शरीरमा भष्म लगाएर देखिनेवाला नागा साधु पनि ... बाँकी अंश»
'धूमपानले छिटै निम्त्याउँछ बूढ्यौली'
२०७५ माघ ५ शनिबार, काठमाडौं । धूमपानले छिटै नै बूढ्यौली लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । एक अध्ययनले अनुसार मानिसलाई धूमपानले २० वर्ष छिटै नै बूढ्यौली सुरु हुने देखाएको हो । ... बाँकी अंश»
हनिमून मनाउन गएको जोडीले नशाको तालमा खरिद गरे बसेकै होटल
२०७५ माघ ४ शुक्रबार, काठमाडौं । जोसमा होस गुमाउन हुन्न भने भनाइ छ । जोसमा होस गुमाउँदा श्रीलंका घुम्न आएको एक जोडी बदनाम हुन पुगेका छन् । यो मामिला रक्सीको नशाम रहेको एक जोडीको फैसलाको हो । एक बेलायती जोडी हनिमूनका लागि श्रीलंका घुम्न आएका थिए । रक्सीको सुरमा रहेका उनीहरुले श्रीलंकाको एक होटल नै खरिद गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
सिंगापुरमा बन्दैछ संसार लोभ्याउने विमानस्थल
२०७५ माघ ४ शुक्रबार, काठमाडौ । विमानस्थल लामो दूरीबाट आउने पाहुनाको लागि पहिलो आकर्षण हो । त्यसैले धेरै मुलुकले आफ्नो विमानस्थल आकर्षक बनाउने प्रयास गर्छन् । जसमध्ये सिंगापुर पनि एक हो । सिंगापुरले निकै आकर्षक एक विमानस्थल बनाएको छ । ... बाँकी अंश»
यो रनवेको बीचबाट कुद्छ रेल जुनसुकै बेला हुनसक्छ दुर्घटना
२०७५ माघ ३ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वमा निकै अनौठो किसिमका सडक संरचना हुने गर्छ । यस्तै एक अनौठो किसिमको सडक संरचनाको विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
जब वासिङटन पोस्टमा छापियो ट्रम्पको राजीनामाको समाचार
२०७५ माघ ३ बिहिबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजीनामा दिएको हल्लाले अमेरिकासहतिका केही मुलुकमा खलबली मच्चिएको छ । अमेरिकाको प्रतिष्ठित समाचारपत्र द वासिङटन पोस्टको एक नक्कली संस्करण भाइरल भएको हो । सो संस्करणले अमेरिकाको गलत समाचार प्रकाशित गरेर मानिसहरुमा भ्रम पैदा गर्ने प्रयास गरेको हो । यो संस्करणको पहिलो पानामा नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनालड ट्रम्पले राजीनामा दिएको सामाचार प्रकाशित गरेको हो । ... बाँकी अंश»
८ वटा जागीर छोडेर युवतीले सुरु गरिन् यस्तो व्यापार, राष्ट्रपतिले दिए पुरस्कार
२०७५ माघ २ बुधबार, काठमाडौं । भनिन्छ, जहाँ दुःख हुन्छ, त्यहीँ सुखको सम्भावना पनि हुन्छ । कसैले अथक प्रयास गरेर आफ्नो उद्देश्यमा अघि बढ्छ भने उसले कुनै न कुनै बाटो भेटाउन सक्छ । एक भारतीय युवती यसको उदाहरण बन्न पुगेकी छिन् । ... बाँकी अंश»
सुन्दर महिला मात्र बस्ने गाँउमा किन छ पुरुषको अभाव ?
२०७५ माघ २ बुधबार, काठमाडौं । विश्वमा धेरै अनौठा कुराहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । त्यस्तै अनौठो गाउँ ब्राजिलमा फेला परेको छ । ब्राजिलको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा रहेको सो रहस्यमयी गाउँमा केवल महिलाहरु मात्र बस्ने गर्छन् । रियो दि जेनेरियोबाट ३ सय माइल उत्तरमा रहेको एक सानो गाउँमा करिब ६ सय महिला मात्रै बस्ने गर्छन् । जसमा ३ सयभन्दा बढी २० देखि २५ वर्ष उमेरका महिला छन् । ... बाँकी अंश»
संसारका सबैभन्दा सम्पन्न देशहरु
२०७५ माघ २ बुधबार, काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको आफ्नै किसिमको विशेषता हुन्छ । फरक–फरक विशेषता भएका मुलुकहरुलाई फरक फरक सूचीमा राख्न सकिन्छ । ... बाँकी अंश»